China fonon-tànana môtô nohamafisin'ny bateria Miaraka amin'ny orinasa sy mpanamboatra CE S28B | Eigday
Tsy tantera-drano, tsy mahazaka rivotra
FFamolavolana fiarovana ull: fiarovana ny Knuckle mitambatra, fiarovana amin'ny fanoherana ny fifandonana, fiarovana ny sisin'ny rantsantanana kely.
Famolavolana kofehy marefo amin'ny rantsantanana
Famolavolana efijery mikasika
Famaritana mari-pana 3 sy hafanana eo noho eo: ampiarahana amin'ny sehatr'asa hafanana telo samy hafa - avo, afovoany, ambany, azonao fehezina mora foana ny mari-pana amin'ireo fonon-tànana amin'ny moto. Ny rafitra fikirakirana mafana 3 dia afaka manome hafanana mety indrindra ho an'ireo olona mila izany. Azonao atao ny mahatsapa fa mafana kokoa ny tananao rehefa mandrehitra fonon-tanana ao anatin'ny 30 segondra.
Tonga lafatra ho an'ny fanatanjahantena ety ivelany: Ny fonon-tànana fanafanana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy dia mety tsara amin'ny fanatanjahantena an-kalamanjana amin'ny andro mangatsiaka na mangatsiaka, indrindra indrindra amin'ny mitaingina bisikileta, bisikileta, fitsangantsangana, skating sns.
❖Teknolojia Vaovao Fna Hmihinana System
Controller: Fanaraha-maso ny haavon'ny hafanana telo; Teknolojia Bluetooth avy amin'i App; Teknolojia fanaraha-maso tsy misy tariby; Mizara - mpanara-maso sehatra ho an'ny akanjo;
Fitaovana fanamafisam-peo: fibre karbona, Fibre mitambatra, tariby fanafanana firaka.
Ankehitriny, ny fibre mitambatra dia azo antoka kokoa, tsy miovaova ary haingana ny vokatra fanafanana.
Fomban'ny Heating Pad vita amin'ny fonon-tànana - Pad fanaovana fanafanana lava kokoa izay nofonosina manodidina ny rantsan-tànana dimy, noho izany dia hafanaina ihany koa ny tendron'ny rantsan-tànana, tsy amin'ny rantsantanana dimy ihany.
❖ Hfihinanana Vahaolana: 3.7V / 5V / 7.4V / 12V
Teo aloha: Fonon-tànana miakatra bateria S67B
Rechargeable bateria fanafanana fonon-tànana Liner manify azy ...
SAVIOR ivelan'ny toetr'andro tsy misy valinteny Windproof henoina Glov ...
CE Cetificated heater moto vita amin'ny baoritra Miaraka Kn ...